ကိုယ်သာ သူ့နေရာမှာသာဆိုရင် – The Only Way To Go!
Posted on November 22, 2019 by barnay
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိရှေ့မှာ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုအား မြင်ရ၊ကြားရ၊တွေ့ရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ သည်
ရန်ပြန်မူလိုစိတ်များ သာ တဖွားဖွား စိတ်အိမ်အတွင်း၌ မိမိကိုယ်တိုင် သတိမူမိဘဲ ဖြစ်ရ၏။
ထိုသို့သော အချိန်များ၌ မိမိစိတ်တွင်မူ အတွေးစအား သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုလျှင် ဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့် မပြောင်းလဲနိုင်ပါမူ …. ထိုစိတ်သည် မိမိအား ပူလောင်မှုကိုသာ ဖြစ်စေ၏။ ဤနည်းဖြင့် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ထွက်ပေါ်မလာနိုင်။ သူတပါးကိုလည်း ကူညီမှုမပေးနိုင်။ မိမိ၏ အားထုတ်မှုသည် လမ်းမှားဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ရ၏။
လူတိုင်း၌ သူ့အခက်အခဲနှင့်သူ ရှိကြ၏ ။ မည်သူမျှ ခက်ခဲ့ခြင်း အရှက်ကွဲခြင်းကို အလိုမရှိ။
ဥပမာ .. ဘတ်စ်ကားပေါ်၌ ခရီးသည်တစ်ယောက်မှ မူး၍ အန်နေပါမူ။ ထိုသူသည် ကားမူးချင်၍ ကာပေါ်၌ အန်ချင်၍ ထိုအခြင်းအရာကို ပြုမူနေသည်မဟုတ် သူ့အခက်အခဲနှင့်သူသာ ဖြစ်နေရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုအရာကို နားလည်ပေးရပေမည် အခါသင့်လျှင် အကူအညီ ပေးကောင်းပေးရပေမည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်သည် မိမိထံ၌ဖြစ်နေပါမူ မိမိသည်လည်း ထိုသို့သော အကူအညီကို ကျေးဇူးတင်မိပါလိမ့်မည်။
ဤအခြင်းအရာများကား ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဟူသော စိတ်အခြေခံကောင်းမှ ထွက်ပေါ်လာြခင်း ဖြစ်ပေသည်။
( ၂၂ရက် ၊ နို၀င်ဘာ ၊ ၂၀၁၉ )
Posted in စိတ်, လူငယ်တိုးတက်ရေး, သဘာဝ